Wakiilka Qaramada Midoobey ee Soomaaliya oo ka digey in la xiro Xawaaladaha - Wargane News
Home Somali News Wakiilka Qaramada Midoobey ee Soomaaliya oo ka digey in la xiro Xawaaladaha
Wakiilka gaarka ah ee Qaramada Midoobey u fadhiya Soomaaliya Nicholas Kay ayaa ka digey in dhibaato xoog leh oo ka dhalaneysa haddii dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool laga xanibo in ay ehelkooda lacago ugu soo diraan Soomaaliya.
Nicholas Kay ayaa sheegey in Malaayiin Soomaali ah noloshoodu ku xiran tahay lacagaha Xawaaladaha ee ehelkoodu u soo diraan, waxaana ka dhalan kara xanibaad loo geysto lacagaas, xaalad bini’adaanimo oo ku kacayso dhaqaale badan, oo lacagta xawaaladuhu dabooli jireen
Hay’adaha gar-gaarka ee Oxfam International iyo Adeso ayaa sheegaya in qiyaastii 1.3 Bilyan oo Dollar loo diro Soomaaliya kuwaas oo la marsiiyo Xawaaladaha.
Bangiyada dalka Maraykanka ayaa wada qorshe ay gebi ahaanba ku joojinayaan la shaqeynta Xawaaladaha Soomaalida, sidaas oo kale waxaa bilaabey qaar ka mid ah dalalka Yurub sida Sweden, Waxaana Bangiyada reer galbeedku ku doodayaan in Xawaaladuhu aysan soo buuxin sharciyaddii loo baahnaa. Mr Kay ayaa sheegaya in ay jiraan waddooyin iyo farsamooyin lagu badbaadin karo nidaamka Xawaaldda ee Soomaaliya.
Soomaaliya kama jirto Dowlad xoog badan oo leh nidaam dhaqaale oo fadhiya, Bangiga Dhexe iyo kii Ganacsiga ee Soomaaliya ayaa ah kuwo shaqasdoodu tahay mid aan dhaafsiisneyn Muqdisho, Waxaana Soomaali badan wadnaha farta ugu hayaan sida xaal noqon doono haddii la xanibo Koontooyinka Xawaaladaha.
Somaliland: Waraysi Lala Yeeshay Safiirka Ingiriiska U Qaabilsan Arimaha Somaliland Iyo Maamulka Muqdisho Kana Hadashay Arimo Badan